Mahazo Olona Betsaka Ny Seho Iray Ataon’ireo Vazimba Teratany Ao Aostralia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Marsa 2016 2:48 GMT
Mpanoratra sady mpisehatra amin'ny “Black Comedy” ao amin'ny ABC’ .” Sary: ABC
Ny 13 Febroary 2016 no niseho voalohany tao amin'ny PRI.org ity lahatsoratr'i Carol Hills ho an'ny The World ity, ary naverina navoaka etoana ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna vontoaty.
Tsy fahita loatra ao amin'ny fahitalavitra Aostraliana ireo vazimba teratany. Nefa nahazo olona betsaka hanaraka azy ny seho iray mahatsikaiky ary azo ambara ho teo noho eo no nahavitàny izany.
“Fony izahay nanao ny andiany voalohany, tsy dia mbola nahazo antoka loatra ny ho endrik'ilay seho,” hoy i Nakkiah Lui, mpiara-misehatra sy mpiara-manoratra ny “Black Comedy,” izay vokarin'ny Australian Broadcasting Corporation. (ABC). “Tonga arabakiteny izahay hamaly dokambarotra iray izay nilaza hoe ‘Misoràta raha toa ianao ka bandy mainty ary mihevitra fa katsikana.’ Ka inona moa, ny bandy mainty rehetra eto Aostralia no mihevitra fa mahalatsaka ry lerony, ka araka izany dia toy ny jamba nifampitantana fotsiny izahay.”
Ny “Black Comedy” no seho mahatsikaiky voalohany tao amin'ny fahitalavitra Aostraliana tato anatin'ny 30 taona. Ilay andrana tamin'ny 1973, “Basically Black,” tsy nahavita velively nisava làlana. Fa ny “Black Comedy” tonga dia lasa fahombiazana teo noho eo ary efa nanomboka ny andiany faharoa aminy.
Lazain'i Lui fa manana zavatra hatolotra ny tsirairay ilay seho ary mitrandraka ihany koa avy amin'ireo hadisoan'ny fotsy tamin'ny fahotàna niandohana tao Aostralia : fanjanahana ireo vazimba teratanin'i Aostralia .
“Manana hatsikana tena manindrona izahay, izay mazàna no tsy mampahazo aina loatra ireo olona tsy avy amin'ny vazimba teratany fa maha-toran'ny hehy ireo vazimba kosa,” hoy izy.
Ohatra iray: nanoratra sy nilalao dokambarotra iray i Lui, ho anà dokambarotra mahatsikaiky momba ny vokatra fanosotra amin'ny tarehy, Pretty for an Aboriginal (Manja izany raha Vazimba an). Mazava hoditra i Lui. Vehivavy avy amin'ny Vazimba ao amin'ny Firenena Gamilaroi ao Aostralia ny reniny. Mponin'ny Nosy Torres Strait ny rainy. Ara-.poko dia toy ny olona avy any Papouasie-Nouvelle-Guinée ry zareo.
“Nolazaina tamiko foana mandra-pahalehibe fa “manja aho raha samy vazimba” na hoe tsara vintana aho fa tsy nanahaka ny Vazimba,” hoy izy. “Rehefa nizara ny tsiambarateloko tamin'ny reniko sy ny rahavaviko aho dia nilaza ry zareo fa efa niainany koa ny zavatra tahaka izany. Dia toy izany koa ireo nenitoako rehetra. Toy izany koa ireo anadahy sy rahavavy tsy omby kibo amiko rehetra, ny Vazimba rehetra namako. Samihafa endrika daholo izahay rehetra, samy hafa toetra, samihafa loko. Tena tsy nampino fa dia nampalahelo, nefa nahatsikaiky, satria samy manja daholo izahay rehetra.”
Seho iray mahatsikaiky sady malaza ny “Black Force,” miresaka momba ny SWAT andiana polisy manokana ho an'ireo Vazimba teratany izay misambotra ireo Vazimba tsy mitondra tena loatra toy ny fanaon'ny mainty. Milaza i Lui fa valinkafatra mahatsikaiky mivantana ho an'ny tsy fahampian'ny fahasamihafàna ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny fahitalavitra Aostraliana io.
“Ny tena ataon'ny ‘Black Force’ dia mitondra ny kolontsainay ho eo anaty efijery amin'ny alàlan'ny fakàna tàhaka iray, nefa koa sady manavotra azy, raha ny hevitro,” hoy izy. Voaray tsara ny “‘Black Force’ eny anivon'ireo tsy Vazimba satria heverin-dry zareo fa mahazo vazivazy izy no sady mahazo andinin-tsoratra momba ny saranga, toy ny ‘Inona ny kale?'”
Ambaran'i Lui fa ny “Black Force” dia hevitra mahatsikaiky momba ny tokony ho antom-pisian'ny Vazimba iray ary ahitàna vazivazy ho an'ny Vazimba.
“Ao anatn'ny fizaràna iray dia miteny ry zareo hoe, ‘Tapitra ny lanonana. Avereno any an'efitrano fialàna sasatra/fandraisana vahiny any ny kidoro.’ Ary izany dia tena vazivazin'ireo bandy mainty mihitsy, satria izay trano Vazimba alehanao rehefa lohataona dia misy kidoro iray daholo any amin'ny trano fandraisana vahiny satria mampahazo aina ny sady mitsotsotra no mijery fahitalavitra sy miresadresaka.”
Misy vazivazy miverimberina ihany koa momba ireo pelaka roalahy mirentirenty antsoina hoe Tidders, teny entin'ny Vazimba manondro ny anabavy/rahavavy, fakàna tàhaka ny “The Real Housewives” nomena anarana hoe “The Housewives of Narramine,” tanàna kely iray any anaty akata Aostraliana.
Mpilalao tantara malaza ihany koa i Lui ary betsaka amin'ny asany no raisina ho toy ny hafakely ao Aostralia.
“Nila nanamarika efajoro foana aho teo amin'ny fiainako,” hoy izy. “Nila nanamarika efajoro koa ny reniko nandritry ny andro niainany. Niaina tany aminà ‘misiona’ ireo dadabe sy renibeko (toy ireo toby fitahirizana ny Teratany Amerikana any Etazonia) izay fotsy hoditra no nitantana azy. Manamarika ny maha-ianao anao ny fanànanao an'izany, na tsara io na ratsy. Mandreraka. Tsy afaka ny hojerena toy ny olombelona mihitsy ianao, amin'ny maha-olona fotsiny. Fa dia ilay hoe Vazimba hatrany.”
Ka inona no anton'ilay hatsikana?
“Nahazatra ny renibeko ny niteny tamiko ‘Inona no azonao atao raha tsy afaka ny hihomehy ianao?’ Ary tamin'ny andro nahafatesany no nitenenany an'io,” hoy izy.
Mino i Lui fa mahery ny hatsikana ary indraindray afaka mahomby be mihoatra noho ny tantara mampihetsipo.
“Heveriko indraindray fa ny zavatra miaraka amin'ny tantara mampihetsipo dia tena ialàn'ny olona vetivety,” hoy izy. “Fantatr'izy ireo ny karazana fivenjivenjena andraisany anjara ary ahafahany mandray fanapahankevitra mialoha na handeha hiaraka aminao amin'izany fivenjivenjena izany izy ireo na tsia. Fa amin'ny hatsikana kosa, afaka toy ny mitondra olona hiaraka hivenjy aminao ianao ary tsy fantany akory aza hoe efa ao anatiny izy. Izany no itiavako ny hatsikana ho toy ny fitaovana iray. Heveriko fotsiny hoe tena manatsimbadika ambony ambany tsy araka ny mahazatra izy.”
4 herinandro izaySamoa